Kugara neInvestment yeUK uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muUK kune:
● Kugara nekudyara muUK
● Ugari nekudyara kubva kuUK
● Visa yegoridhe muUK
● Pasipoti yepiri kubva kuUK
● Kugara nekudyara kweUK nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muUK uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muUK uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muUK zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiriri veUK kunopa masevhisi ekugara nekudyara muUK, Residency nezvirongwa zvekudyara muUK, Residency nehurongwa hwekudyara muUK, yechipiri Residency nekudyara kuUK, mbiri Residency nekudyara muUK, ugari uye ugari nekudyara muUK , Kugara zvechigarire nekudyara muUK, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muUK, Kugara nehurongwa hwekudyara kuUK, Kugara nehurongwa hwekudyara kuUK, Citizenship nekudyara kuUK, Citizenship nezvirongwa zvekudyara kuUK, Citizenship nehurongwa hwekudyara muUK, wechipiri Citizenship nekudyara kuUK, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara kuUK, pekugara uye ugari nekudyara muUK, kugara uye ugari nekudyara muUK, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muUK, Citizenship nehurongwa hwekudyara muUK, Citizenship nehurongwa hwekudyara muUK, chechipiri pasipoti muUK, yechipiri pasipoti zvirongwa muUK, yechipiri pasipoti chirongwa kuUK, mbiri yechipiri pasipoti muUK, pekugara uye yechipiri pasipoti pasipoti i n UK, diplomatic repiri pasipoti muUK, yechipiri pasipoti nekudyara muUK, yechipiri ugari pasipoti muUK, yechipiri pasipoti chirongwa kuUK, yechipiri pasipoti zvirongwa muUK, goridhe vhiza kuUK, vhiza vhiza kuUK, goridhe visa zvirongwa kuUK, chirongwa chendarama vhiza kuUK, chechipiri vhiza yegoridhe kuUK, yechipiri vhiza vhiza chirongwa kuUK, mbiri yegoridhe visa muUK, ugari uye visa yegoridhe kuUK, kugara uye visa yegoridhe kuUK, mugari vhiza mugari muUK, dhiza vhiza scheme kuUK , goridhe visa zvirongwa muUK.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muUK nerutsigiro rwekuwedzera.
Minimum Investment muUK yeResidency nekudyara: GBP 50,000
Nhanganyaya UK uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezve UK
IUnited Kingdom, inosanganisira Great Britain (England, Wales, neScotland) uye Northern Ireland, yakapetwa kaviri kukura kweNew York State. Britain, muchikamu chekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBritish Isles, yakaparadzaniswa neScotland kuchamhembe nedombo reCheviot Hills; kubva kwavari Pennine cheni yezvikomo inowedzera kumaodzanyemba kuburikidza nepakati penzvimbo yeEngland, ichisvika panzvimbo yayo yepamusoro muLake District kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Kuenda kumadokero pamupendero weWales — nzvimbo inozivikanwa nemikwidza nemipata — maMakomo eCambrian, nepo maCotswolds, chiyero chemateru eGloucestershire, achisvika mukati mekuputika kunopindirana.
Inokosha nzira dzemvura dzinoyerera muNorth Sea ndiyo yeThames, Humber, Tees, uye Tyne. Kumadokero kune Severn uye Wye, iyo inopinda muBristol Channel uye inofamba, yakafanana neMersey neRibble.
Kunzwisisa nyika dzayo dzakasarudzika, nzvimbo, vanhu, uye nzira dzehupenyu zvinogona kutora hupenyu hwese. Asi, pane zvinhu zvakakosha mumwe nemumwe wekare-pat anofanira kuziva vasati vatora danho.
Imwe nzvimbo, nyika zhinji
UK ine nyika ina: England, Scotland, Wales, uye Northern Ireland. Imwe neimwe ine yayo yemhando tsika uye hunhu, zvine hutsinye zvakasimbiswa nevanhu veko.
Matunhu akasiyana siyana nenzvimbo dzemumaguta mukati merudzi rwese vane hunhu hwavo. Zvinowanzo taurwa kuti vanhu vanobva kuchamhembe kweEngland vakanangana uye vakatwasuka kupfuura avo vanobva kumaodzanyemba, semuenzaniso. Kunyangwe iwe wakakodzerwa sei iwe kuti uwane aya notorieties kuve achavimba kunyanya kune vanhu vaunosangana navo!
IUK inyika yakadzama ine tsika dzakasiyana uye nekusiyana kukuru kwekutenda kwese nenzanga. Kupatsanura kunoenderana nerudzi, bonde, kutungamira pabonde, zera, kana kusagadzikana hazvisi pamutemo. Vazhinji expats vanodhonzwa kuenda kuUK nekuda kweizvi zvakasiyana, vachifunga kuti inzvimbo inokoka uye ine rugare yekugara.
Zvisinei hazvo yakasiana nehama yayo, kune mamwe maitiro akakosha akagovaniswa nevazhinji veBrits. Ivo vanokudzwa nekubata kwavo, havarerekere kune yakanakisa mharidzo dzekunzwa, uye vanokodzera kuchengetedzeka kwavo. Izvi zvinogona kutungamira mashoma ekumbopopota kuti anzwe kuti "anotonhorera" - kana kutoshoreka - kubva pakutanga. Kunyangwe izvi zvichitadzisa nhaurirano pamotokari dzakavhurika, iwe uchaona pasina nguva kuti maBrits anogona kunyatso kudziya uye kufadza semumwe munhu.
Chokwadi, kuseka kunotyisa nenzira inokatyamadza kuBrits - kunyanya kugona kuzvinyengedza wega! Iva zvazvingaita, usavhiringidze yavo yekuzvitutumadza messes nekusavapo kwekutya. Zviri chaizvo kuti ivo vanokoshesa kufunga uye tsika dzakanaka, uye zvinoonekwa se "maitiro asina kukodzera" kufadza.
Vazhinji vekare-patsva vanoona kuti vanofanirwa kufunga kuti vangaziva sei iyo chaiyo nyaya kana vachitaura neBrits. Vamwe vangade kupa zvisina kujeka maitiro pane njodzi inokonzeresa - saka ungangoda kuteerera nekungwarira kuti uwane mafungiro avo. Zvichida ndicho chikonzero chikonzero Brits inoda yakasarudzika banter zvakanyanya - kunyanya muchiitiko icho chine chekuita nemamiriro ekunze!
Kukurukura mamiriro ekunze
Kunyangwe yakawana mukurumbira wekusviba, blustery, uye kutonhora, iyo UK pachokwadi ine zvokwadi kwazvo yakasarudzika mwaka uye huwandu hwakasiyana hwemamiriro ekunze. Iyo yakareba, kazhinji inotonhorera nguva yechando inogona kuve muyedzo wekubuda kubva kunopisa mumhepo asi zvakadaro iyo yegore uye yepakati-gore mwedzi kazhinji inopa chimwe chinhu chinonzwisisika chemazuva akajeka. Chokwadi, kunyangwe pakureba kwezhizha, kunaya kwemvura inogara iri mukana.
IUK ndiyo hupfumi hwepasi rose hwakakura kana ichifungidzirwa neGDP. Vazhinji vekare-patsva vanokweverwa kurudzi nemihoro mizhinji yepamusoro uye nehunhu hwakanaka hwehupenyu. Asi, nzvimbo dzakatarisana hadzina kupararira zvakaenzana pamusoro penzvimbo dzayo dzese pamwe nemabasa.
Zvemabasa ekushandira - semuenzaniso, kubhengi nekudzivirira - zvakabudirira pamusoro pemakore mazhinji, nepo mabhizinesi akajairwa - semuenzaniso, kugadzira - aramba. Sezvo ichimiririra zvinopfuura chiuru chimwe chezviuru muhupfumi hweBritain, kusangana kwemanejimendi emari muLondon uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva zvinoreva kuti matunhu aya aputika. Nzvimbo dzakasiyana hadziwanzo kunzwa mabhenefiti akafanana emari.
Vanotsvaga vanogona kunge vachizowana mibairo yepamusoro munzvimbo dzakabudirira; zvisinei, ivo vachadawo kurwa nemari inodhura yehupenyu. Nenzvimbo dzekuUK dzichishanda zvakavimbika kugadzirisa hupfumi hwadzo - uye kutsunga kwenzvimbo dzakakomba dzemadhorobha dzakaonekwa munyika dzese - mamwe marg-ex-pats anogona kubhadharwa nemararamiro epamusoro kunze kweguta.
MaBritain chikamu chikuru vanoshanda kwenguva yakareba. Zvakajairika kuona vanobatana vachitora basa ravo kumba navo husiku uye kupera kwevhiki. Nechitarisiko chitsva chematsamba matsva, vashoma vekare-patsva vanogona kuona kuti vanovimbwa kuti vagare vachikurukura kusangana naboss wavo. Nechemumoyo, hurukuro inoenderera pamusoro pekuti izvi zvinokonzeresa sei purofiti yakamhanyisa masangano mazhinji kuyedza kuita yepamusoro basa-hupenyu mwero kune vashandi vavo.
Nepo tsika yenguva dzakareba uye basa rakaoma riri musimboti muUK, vashandi vanochengetedzwa zvakare kubva pakupatsanurwa uye chikonzero chisina musoro nehukuru hwekodzero dzepamutemo. Masangano mazhinji anowedzera kuyedza kugonesa vamiriri vavo kugadzirisa bhizinesi uye mhuri - vachibatsirwa nehurumende-inotarisirwa nevabereki zororo, kubhadharwa kwematernity / kubereka, uye kubatsira nemari yekuchengeta vana. IUK ine rakasiyana, rakasiyana tsika vashandi.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeUK
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muUK
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye UK
Kugara nekudyara kweUK
Tier-1 Innovator / Entrepreneur vhiza & Tier-1 Investor vhiza
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweUK
Unofanira kurarama 9 mwedzi pagore muUK TR uye yePR mushure memakore mashanu (ILR)
Mushure memazana matanhatu emakore yakazara neILR chinzvimbo
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vekuUK
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweUK
£ 50,000 Tier-1 Innovator / Entrepreneur vhiza kuburikidza nekutanga kwekudyara mumabhizinesi eUK
£ 2,000,000 Tier-1 Investor visa kuburikidza nekudyara muUK Government zvisungo, kana kugovera capital mumakambani eUK. Kutenga zvivakwa hakubvumidzwe
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweUK
United Kingdom ndeimwe yenyika dzine simba pasi rese. Inotarisirwa senzvimbo ine tsika dzakasiyana, 1 yenyika dzese dzakanakisa dzehutano hwehutano, mikana yepamusoro yedzidzo, uye chikamu chakasiyana chemari. Iyo UK yegoridhe yekugara chirongwa chine chinokurumidza kuita pakati peanofananidzwa zvirongwa zveG8 nyika: kazhinji, iyo mvumo inopihwa mukati memwedzi 6-8. Maitiro acho anotariswawo nenzira yakajeka, achisimbisa mhedzisiro inotarisirwa. Zvakare, iyo isiri-inotongwa mugari chinzvimbo chinopa inokwezva mutero nharaunda yeakakwira mambure akakosha vanhu. Vanyoreri nenhengo dzemhuri yavo vanofanirwa kugara munyika kwete pasi pe50% yenguva mushure mekupihwa kwavo mvumo.
Mhuri inopinda muUK
Chikumbiro chekugara chinogona kusanganisira wako wawakaroorana naye, vana vari pasi pemakore gumi nemasere uye vana vanovimba nemari vanopfuura makore gumi nemasere. Mushure mekuwana mvumo yekugara, vese vanyoreri vanofanirwa kugara kuUK uye mvumo yekugara yevana ichazongopihwa kana mvumo yevabereki vese iri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muUK kukurudzira
Kuti vakwanise chirongwa chendarama chekugara, vanyoreri vanofanirwa kuendesa humbowo hwekuve nemari yakakwana yekuzvitsigira nevanovimba vasina kutora basa.
Iwe unofanirwawo kuita United Kingdom imba yako huru. Izvi zvinoreva kuti haugone kushandisa anopfuura mazuva zana nemakumi masere pagore kunze kweUK. Iwe haudiwe kuratidza bhizinesi manejimendi ruzivo kana hunyanzvi hweChirungu panguva ino.
Iwe unozotanga kuwana Tier 1 vhiza kwemwedzi makumi mana, uye unofanirwa kuita mari yakasarudzwa mumwedzi mitatu yekupinda. Mvumo yekugara, mushure mekupera kwemwedzi makumi mana yekutanga nguva, ichawedzerwa kwemakore maviri kana iwe ukaenderera nekugutsa zvikumbiro mukugara kwako kwese.
Mushure memakore mashanu unenge wave mugari wechigarire. Kune ichi chinzvimbo iwe unofanirwa kuratidza ruzivo rweChirungu, Welsh kana Scottish Gaelic mutauro uye zvekutanga kujairana nehupenyu uye tsika yeUnited Kingdom. Iwe zvakare uchave nemukana wekunyorera kuve mugari weUnited Kingdom.
Mari inodiwa kuUK
Kuti uwane pekugara kwenguva pfupi kwemakore mashanu uyezve kugara zvachose, vanyoreri vanofanirwa kuisa GBP 2 mamirioni. 75 muzana yemari yekudyara inofanirwa kunge iri muchimiro chemabhondi ehurumende kana bhizinesi kudyara uye makumi maviri neshanu muzana anofanira kushandiswa pakutenga zvinhu kana kuita dhipoziti yebhangi.
Kana iwe uchida kuwana kugara zvachose nekukurumidza, unofanirwa kukwidza huwandu hwemari. Invest GBP 5 mamirioni, iwe uchave unogara zvachose mumakore matatu, uye kune GBP gumi mamirioni, iyo nguva yekugara zvachose makore maviri chete. Izvi zvinongoshanda chete kune mukuru anonyorera uye kwete kune vanovimba. Vokupedzisira vanowana pekugara zvachose mushure memakore mashanu pasi pesarudzo nhatu dzekudyara.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweUK
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuUK uye Residency ne Investment Lawyers yeUK inopa vatengi uye mhuri dzavo kuUK nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuUK, kugara nekudyara kubva kuUK uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Yedu masevhisi haangogumiri pakugara nekudyara kubva kuUK kana Golden Visa kubva kuUK kana ugari nekudyara kubva kuUK kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuUK, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu UK kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muUK uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuUK uye sekondari kugara.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari vemuUK:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeUK, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeUK, inokwanisika investment immigration solicitors kuUK, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuUK, inokwanisika Residency nemaInvestment magweta eUK uye inokwanisika yekufambisa yekufembera femu
Kugara nekudyara kubva kuUK kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muUK kune 37 Nyika.
Citizenship nekudyara kubva kuUK kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuUK kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuUK kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuUK.
Goridhe visa zvirongwa muUK kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuUK kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuUK kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuUK kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweUK kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muUK nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muUK, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweUK. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muUK avo vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muUK, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveku UK neinvestment muzvivakwa muUK.
Unoda kuziva - UK Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuUK kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuUK. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuUK inosanganisira:
Magweta edu achanzwisisa zvaunoda kuti ubve kuUK kana kuUK, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweUK kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeUK uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuUK, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuUK isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye emhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuUK. Magweta edu akasarudzika eResidency nekudyara kuUK uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuUK zvagadzirira, isu tichazvizadza neakakodzera zviremera zveUK.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweUK changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muUK kune Vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muUK:
Residency nebasa rekudyara kuUK hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuUK.
Residency nezvirongwa zvekudyara kuUK hazvipi zvinopihwa zveTechnical kuongororwa muUK kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuUK.
Residency nekutsvaga kwekudyara kuUK hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muUK.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeUK hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muUK.
Residency nebasa rekudyara kuUK haisi yemabhizinesi ari kuita zvine njodzi kana zvine njodzi zvombo zvehupenyu kana zvombo zvenyukireya muUK.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweUK haruwanikwe kune vanhu veUK vanoita mukutengesa, kuchengetedza muUK, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeUK haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeUK hadzisi dzezvitendero zvevanamato uye avo anobatsira muUK.
Residency nebasa rekudyara mu UK haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muUK.
Kugara Kwedu magweta muUK haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muUK.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veUK neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muUK kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muUK.
Kugara nekudyara muUK uye nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muUK yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muUK.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveUK, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuUK inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheUK.
Isu takatora makore eruzivo kune mbiri Residency kuUK inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuUK.
Zvakaitika Kugara nevekutsvaga mari kuUK uye vamiriri vepamutemo kuUK vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta uye vamiririri vekuUK kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuUK uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuUK
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira UK, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuUK kukundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuUK
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kuUK ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veUK, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweUK uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeUK
Maitiro Ekubvumidza Kubasa kuUK
Kwekugara kwenguva pfupi muUk
Permanent Residence muUK
Embassies uye ma Consulates eUK
Kugara neInvestment muUK uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuUK nekuda kwekukurumidza kana mune ramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako kuUK nekudyara, isu semumwe wako kuUK, tiripo kuti tipe yakawanda mamwe masevhisi uye uye kana iwe ungangoda kuUK nemitengo yakachipa.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuUK, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuUK, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano kuUK kutigadzira one-stop shop kuUK uye nyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi eUK mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kuUK nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-kumusoro kuUK nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muUK kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuUK yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muUK
Chero ani investor anotamira kuUK angangoda account yako yekubhangi muUK uye account yebhangi yekambani muUK, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muUK
Kana iwe uchida kubvunza muUK, for mhinduro dzemadhijitari muUK kunge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muUK kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku UK kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo muUK kutanga pakarepo muUK.
HR Services muUK
Our kambani yevashandi muUK inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muUK vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeUK
Bhizinesi foni masystem eUK pamwe ne nhamba dzeUK Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muUK
Accounting, kushingairira kwakakodzera muUK uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muUK
Setup bhizinesi muUK
Mushure mekugara zvakare nekudyara kuUK, setup bhizinesi mu UK.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muUK
Kugadzira Webhu muUK
Ecommerce Kuvandudza muUK
Webhu kuvandudza muUK
Blockchain kuvandudza muUK
App Kubudirira muUK
Software Kubudirira muUK
Magweta e Residency neInvestment muUK
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuUK uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuUK, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuUK ine vamiririri vekunze vanoendawo kuUK, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi ruzivo rweUK ne kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kune vanhu veUK uye mhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuUK inopa yakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuUK, pane mvumo yekugara muUK yabvumidzwa.
Simba regweta reUK rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muUK. Kana iwe uri kuUK kana kuronga kushanyira UK, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuUK kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeUK. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yekupostora kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weUK.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muUK
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muUK?
Kugara nekudyara kuUK, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweUK kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUK kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. inotsigirwa nehugaro nekudyara masevhisi kuUK, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muUK, kugarisana kwakanakisa nemagweta ekudyara muUK uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuUK, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiririri vezvekudyara kuUK, uye akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. kuUK.
Kugara nemabasa ekudyara mari kuUK | Kugara nevamiriri vemari muUK | Kugara patsva nemagweta eInvestment muUK | Kugara nemagweta ekudyara muUK | Kugara nevanoona nezvekudyara kuUK
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muUK?
Citizenship nekudyara kuUK, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mugari weUK kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUK kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuUK. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuUK, ugari nehurongwa hwekudyara kuUK inotsigirwa nehugari nehurongwa hwekudyara kuUK, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muUK, vagari vepamusoro netaundi ekudyara kuUK uye vagari venyika vakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuUK, vachishanda pahukama hwakanakisa nevamiririri vezvekudyara muUK, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muUK.
Affordable Investor immigration services kuUK | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika solicitors muUK | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muUK | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muUK | Vanodhura vatyairi vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika kuUK | Affordable immigration law firms kuUK
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri kuUK?
Yechipiri pasipoti muUK, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weUK kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUK kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuUK, yechipiri pasipoti chirongwa cheUK chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eUK, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muUK, magweta echipiri epasipoti muUK uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano kuUK, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muUK, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muUK.
Chechipiri pasipoti services kuUK | Chechipiri pasipoti vamiririri muUK | Chechipiri pasipoti magweta muUK | Yechipiri mapasipoti magweta muUK | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuUK
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muUK?
Ndarama vhiza muUK, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yekuUK kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUK kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera yegoridhe visa kuUK, chirongwa chendarama vhiza yeUK inotsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi kuUK, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muUK, akanakisa endarama vhiza magweta muUK uye akanakisa endarama vhiza varairidzi kuUK, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muUK, uye akanakisa ekupinda nekubvunza mafemu muUK.
Ndarama vhiza services kuUK | Ndarama vhiza vamiririri muUK | Magoridhe vhiza magweta muUK | Magoridhe vhiza magweta muUK | Goridhe vhiza vanopa mazano kuUK
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muUK?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muUK iri GBP 50,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuUK yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu kuUK uye vamiririri muUK vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muUK.
Kugara nekudyara kuUK kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuUK uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuUK ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeResidency neInvestment kuUK, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Residency nekudyara kuUK kana investor visa kuUK?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuUK kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuUK kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuUK kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuUK kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuUK kubva kuMalaysia, Residency nekudyara kuUK kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuUK kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuUK kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuUK kubva kuNepal, Residency nekudyara kuUK kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuUK kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeUK
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuUK
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeUK
Dhipatimendi reKubuda muEuropean Union
Hofisi yeKhabhinethi (www.cabinet-office.gov.uk/)
Dzekare uye Nyowani Maguta eElinburgh
Nhamba 10 Downing Street-British Prime Minister
Central Hofisi Yemashoko (www.nds.coi.gov.uk/)
Kodzero Dzevanhu: United Kingdom
British mota Museum
Office ye National Statistics
BBC CouVatori venhau Vasina Border: United Kindom
Brexit-Hurumende ruzivo nezve Brexit.
MaCastle neMataundi eKuta Edward kwaGwynedd
Vamiriri vedzimwe nyika kuUK
Embassy yeBritish, Washington DC
Iyo National Museum yeSainzi & Indasitiri
Amnesty International: nyika dzakabatana
Iyo World Factbook - United Kingdom
UK Mission kuUnited Nations (New York).
Hurumende Portal Webhu saiti (www.i-uk.com)
Directgov-UK ruzivo rwehurumende nemasevhisi.
United Kingdom Paramende House of Lords
London Chamber of Commerce nemaindasitiri
Dhipatimendi reBhizinesi, Simba & Maindasitiri Isu
Dhipatimendi Rekusimudzira Kwenyika Dzepasi Pose (www.dfid.gov.uk/)
Dhipatimendi reZvenyika Dzebhizimisi
Natural Nhoroondo Museum
Guardian Unlimited: Kufamba United Kingdom
Iyo Nheyo Foundation: United Kingdom
UK Statistics Chiremera
nhoroondo Profile: United Kingdom
HM Treasure (www.hm-treasury.gov.uk/)
Kunze kwenyika & Commonwealth Hofisi (FCO)
UK Embassies Kumhiri Kwemakungwa
Dhipatimendi Rekutengesa neindasitiri (www.dti.gov.uk/)
Link to Dhipatimendi Rekupinda muUK , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muUK